Clamp Tube Fibolan'ny karbona, Pole Karibon-tsibolika, Tube misy tariby teleskôlôbika, mpanamboatra sy fantsom-pahavam-bava Telescoping any Chine
Description:Clamp Tube Fibolan'ny karbona,Ny paompy karbonika,Tariby fibra tariby amina karbona,Fibon-tsolika vita amin'ny Telescoping,,
Home > Products > Tube Fibolan&#39;ny karbona sy fiforahana
Ny vokatra avy amin'ny Tube Fibolan'ny karbona sy fiforahana , mpanofana manokana avy any Shina, Clamp Tube Fibolan'ny karbona , Ny paompy karbonika mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Tariby fibra tariby amina karbona R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
25x23X500mm Mirongatra ny fibre vita amin'ny karbonina vita amin'ny matotra miloko Contact Now
Rano Fibon-tsolika vita amin'ny 1000mm Length Contact Now
Angataho mivantana ny fibre karbonina misy loko mavesatra Contact Now
3K Rindran'ny fantsom-panafody vita amin'ny mavokely / Plain manjelanjelatra Contact Now
Ny fantsom-boron-tsolika vy Contact Now
12 * 10 * 500mm fantsom-barotra vita amin'ny tsiranoka vita amin'ny tsiranoka Contact Now
3K twill matte karbonica fantsom-peo bitika Contact Now
Fantsona karbônina mahery vaika misy vidiny ambany Contact Now
Ny fantsona mahery vaika vita amin'ny karbonina matevina mahery vaika Contact Now
3K Fibon-tsolika vita amin'ny karbônina na Tube misy miloko maro loko Contact Now
3K Plain Twill Uni-direksyon Carbon Fiber Tube Contact Now
3K Fibon-tsoloka vita amin'ny karbona, Fantsona Contact Now
G10 Fantsona / sodina mahery vaika mahery vaika Contact Now
Toby Fiberglass G10 fanamafisana kalitao avo lenta avo lenta Contact Now
Ny tsindry mavesatra famonoana vy vita amin'ny karbonina Contact Now
Mivarotra mivantana ny fantsom-bolan'ny karatra vita amin'ny orinasa-miasa Contact Now
Ny fanoherana ny tsoroka tsara dia fantsona fantsom-bidy fitaterana ambany Contact Now
G10 Fantsona fiberglass avo be Contact Now
Tube Octagonal avo lenta maoderina avo lenta Contact Now
Kalitao cnc avo lenta clamp fantsona azo ampiasaina Contact Now
Hard Anodizing aluminium famoahana haingana famahana Contact Now
cnc fametahana fantsakan-tànana vita amin'ny aluminium clamp Contact Now
CNC Aluminum Tube Clamp OEM 25mm Diameter Contact Now
OEM mainty Anodized CNC Aluminum 25mmTube Clamp Contact Now
Ny fantsom-paosy feno boribory dia noforonina amin'ny alàlan'ny fonosana vita amin'ny lamba vita amin'ny valan-jaza manodidina ny mandrelona ary avy eo manasitrana ny fantsona. Ny vokatra dia fantsona manokana sy azo haingam-pandeha izay maivana sy matanjaka. 3K twill matte fantsona fibre karbonika madio dia mpivarotra mafana.Ny 1.5K sy ny fantsona fibre karbonika feno koa dia azo atao koa. Ireo fantsona ireo dia mety ho tapaka, milina lavaka, slotted ary misy halavany sy hateviny isan-karazany. Ny fantsona misy karbona voafatotra dia mahitsy sy fantsom-pahavaratra 3K twill matte fantsona fibre karbonika madio izay ampiasaina matetika amin'ny famonoana, fialamboly RC sy ny sisa.
Ho an'ny fivoriambe tsara dia afaka manolotra clampes aluminium isika. Amin'ny ankapobeny dia mampihetsi-po, izy ireo dia vita amin'ny fitaovana alumina 6061-T6. Raha mila fitaovana hafa ianao dia efa misy koa. Ny fitaovana, ny refy amin'ny endrika dia miankina amin'ny zavatra takinao.
Raha tsy hitanao ny fantsona karbonina sy ny clamp ilainao ao amin'ny katalazy, dia andefaso RFQ izahay miaraka amin'ny fombafombahanao. Azontsika atao ny mamokatra na manamboatra azy ireo hahavita ny filanao tokana. Araka ny sary ataonao dia afaka manolotra fantsona fibre karbonika feno sy fametahana.
Clamp Tube Fibolan'ny karbona Ny paompy karbonika Tariby fibra tariby amina karbona Fibon-tsolika vita amin'ny Telescoping Tube Fibolan'ny karbona